U-Apple wabetha esihlahleni ukuvotela ukusetyenziswa kwe Parler yenethiwekhi yoluntu | Ndisuka mac
U-Apple wabetha esihlahleni ukuvotela ukusetyenziswa kwenethiwekhi yoluntu Parler
NgoDonald Trump esemandleni, izinto ezininzi ezahlukileyo zenzekile kwaye uninzi lwazo lunencasa yokuziphatha ethandabuzekayo. Okokugqibela ibisisikhundla salo Mongameli wayesele enolawulo olugqithisileyo kweli lizwe. Oku kukhokelele kuthungelwano oluthile lwasentlalweni olusetyenziswa ngala maqela ukuvalwa ziinkampani ezinkulu zetekhnoloji ezinje ngeApple, Google, Amazon okanye Twitter. Nangona kunjalo, sizifumana sinolayini ococekileyo obahlula kwinkululeko yokuthetha. Ngoku uSenator uMike Lee wase-Utah kunye neColorado Congressman uKen Buck, bagxeka izenzo zeApple phakathi kwabanye.
Siza kuzama cacisa yonke into eyenzekileyo, ukuyibeka kwimeko.
1 Yintoni iParler kwaye kutheni iinkampani ezinkulu zetekhnoloji ziyivalile?
2 I-Senator kunye ne-Congressman batsala i-Apple, i-Google kunye ne-Amazon ngeendlebe zokuvalwa kuka-Parler
Yintoni iParler kwaye kutheni iinkampani ezinkulu zetekhnoloji ziyivalile?
UMlawuli oyiNtloko weParler
NgoJanuwari kulo nyaka, iGoogle, iAmazon kunye neApple bavotela iParler kwiimarike zabo. Inethiwekhi yentlalo eye yazibeka njenge Isixhobo sokunxibelelana nenqanaba lamaqela asekunene kunye nabavumayo. UParler akazange awuqale umsebenzi wakhe kulo nyaka. Sele enembali ende yeempikiswano ezaqala ngo-2018 noJohn Matze noJared Thomson. Kodwa kwakusekuqaleni kwalo nyaka xa edibanisa isikhundla sakhe, emva kweziganeko ezenzeke kwiCongress.
Abantu abaliqela (abalandeli bakaTrump kwaye bangafuni ukuncama amandla) bathathe isigqibo sokuhlasela i-US Congress, kolunye lolona hlaselo lukhulu kwidemokhrasi kwihlabathi langoku. I-Twitter igqibe kwelokuba lixesha lokuba kuvotwe ezo zonxibelelwano phakathi kwamalungu aqhubeka nohlaselo. Ngesi sizathu, uninzi lwabalandeli belungelo eligqithisileyo bagqibe kwelokuba baqale ukusebenzisa iParler.
Kwakungekho okokuqala abalandeli bakaTrump bekhuthaza inethiwekhi yoluntu. Ngo-Novemba ngo-2020, kunye nelahleko yobugqwirha kunye neetweets ezikhutshiweyo ngenxa yobuqhetseba kunyulo, amanani Parler iphindwe kabini yafikelela kubasebenzisi abazizigidi ezili-10 ngeentsuku nje ezimbalwa. Iqinisekisiwe, ngale ndlela, njengothungelwano lwentlalo lolondolozo kunye nabavoti basekunene. Kodwa kukuba badityaniswe lelinye iqela elinomlo kunye nemeko yangoku: Abakhanyelayo, abangayamkeliyo imigaqo-nkqubo yococeko ebekwe ngabasemagunyeni belizwe nabengingqi ngokuchasene ne-COVID-19. Oko kuhlala kuthethwa: Bangene kwindlala kunye nomnqweno wokutya.
Ngenxa yokufuduka kwabasebenzisi ukuya kwinethiwekhi yoluntu kwaye kungabikho manyathelo okhuseleko okanye ulawulo kubanini beParler, uGoogle ubhengeze isigqibo sokuvota isicelo kwivenkile yakhe. Kungekudala emva koko, u-Apple wajoyina ibango ngeAmazon. IAmazon yayinesitshixo kuba yayiziseva zabo ababezisebenzisa, ke iiParles zazikhubazeke ngokupheleleyo. Umphezulu wepiramidi wabo bonke obu buhlanya, yayingu Ukuqhekeza okukhulu kwedatha yenethiwekhi yoluntu. Idatha ye-70TB iye yavuza, kubandakanya izazisi ezinamagama, iidilesi kunye neenkcukacha zonxibelelwano.
Konke oku kwavalwa, kodwa ngoku kubonakala ngathi khange baqhube kakuhle.
I-Senator kunye ne-Congressman batsala i-Apple, i-Google kunye ne-Amazon ngeendlebe zokuvalwa kuka-Parler
Ilungu leNdlu yeeNgwevu yase-us UMike Lee wase-Utah kunye ne-Colorado Congressman uKen Buck bathumele ileta edibeneyo kwii-CEO ze-Apple, uGoogle kunye neAmazon ukuze babuze isenzo seenkampani ekususeni inethiwekhi yoluntu yePerler kwiivenkile zabo zeapp kunye neenkonzo zokubamba iwebhu ekuqaleni kwalo nyaka.
Ixesha lezenzo ezithathiweyo ngokuchasene nenethiwekhi yentlalontle yeenkampani zayo kunye nokuba iintshukumo zibonakala ngathi azinakho ukwenziwa kwenkqubo yesiqhelo eqhele ukwenziwa xa kukho ulwaphulo-mthetho ekuthiwa lwaphula ikhontrakthi, oko kwenza ukuba kubekho ulungelelwaniso olusondeleyo. Ezi ntshukumo zazi cNgokuchasene nenkampani ekungatyholwa ukuba yaphule umthetho. Ngapha koko, ulwazi olunikezwe nguParler kwiKomiti ejongene neNdlu luveze ukuba iNdlu ibincedisa ukuthotyelwa komthetho kwangaphambi komhla kaJanuwari 6.
IAmazon kwicandelo layo lokugcina iserver, iyekile ukusebenza noParler ngenxa yokungakwazi kwakhe ukumodareyitha umxholo onogonyamelo. UParler wayebuyile kwi-Intanethi ngoFebruwari ngokusingathwa okubonelelwe yiSkySilk kwaye enye indlela yokufaka sele inikezelwe kubasebenzisi be-Android. Kodwa hayi iApple.
Impikiswano iyakhonzwa kunye nembambano nayo. Kwileta ethunyelwe ngabezopolitiko kukho imibuzo emininzi ekufuneka iinkampani ezichaphazelekayo ziyiphendule. Iimpendulo eziza kuhlalutywa ngabo kwaye baya kuthatha isigqibo sokuba ngaba isigqibo senziwe kakuhle okanye hayi. Umbuzo othi nangona ungagqibi ukubopha iApple ukuba unokubangela ukungoneliseki kwinqanaba lokugweba.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » U-Apple wabetha esihlahleni ukuvotela ukusetyenziswa kwenethiwekhi yoluntu Parler
Idatha yabasebenzisi abangaphezu kwezigidi ezingama-500 kuFacebook, avuza kwi-Intanethi
Ukutyikitywa kweApple kuya kuthatha ukhathalelo lwempilo yethu